Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hafatra momba ny fizahantany Cook Islands: Mamandrata aloha!
Amporisiho ny mpanjifa hamandrika mialoha ny fialan-tsasatry ny Nosy Cook. Hafatra iray lehibe avy amin'ny Fizahan-tany Cook Islands izany satria manomana ny hetsika varotra fitsangatsanganana lehibe indrindra any Auckland mandritra ny roa taona.
Rachel Mackey, mpitantana marketing any New Zealand miaraka amin'ny Cook Islands Tourism Corporation, dia nilaza fa manandrana manabe ny mpanjifa amin'ny tokony hamandrihana aloha ny fikambanana. 'Ny hafatray ho an'ny mpanjifa dia ny hoe raha te-hahazo ny trano tadiaviny izy ireo, ho an'ireo daty tadiavin'izy ireo, ary ny vidiny tian'izy ireo aloina, dia tokony ho enim-bolana mialoha ny famandrihana. Ho an'ny fotoanan'ny fialantsasatra an-tsekoly, 12 volana mialoha no atolotra. '
The Love a Little Raro sy Aitutaki - Fanavaozana ny Travel Agent dia atao ao amin'ny Hilton Auckland ny 29 Aogositra manomboka amin'ny 6 hariva. Hialohavana hetsika manokana ho an'ireo mpikarakara fandrisihana sy mpikarakara hetsika. Anisan'ireo mpampiranty ny Moana Sands Lagoon Resort vaovao any Rarotonga. Ny efitrano fivarotana vaovao dia misy efitrano 24 (studio deltaxe deluxe 22 sy suite lagoon roa) miorina amina morontsiraka roa rihana, izay misy fahitana lagoona sy patio na lavarangana.
Ny ivon'ny toeram-pialan-tsasatra dia dobo filomanosana rano be, feno fatotra fialofana amin'ny masoandro ary dobo filomanosana.
Ireo vondrom-piarahamonina vohitra any Ovalau, Fiji dia mahazo fiofanana momba ny fizahan-tany maharitra